Soomaaliya, 10 June 2018
Axad 10 June 2018
UNICEF: Cuduro ayaa ka Dhalanaya Fatahaadaha
Hey’adda Daryeelka Carruurta ugu qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa ka digtay in roobabkii cuslaa iyo fatahaadihii ku dhiftay Soomaaliya ay khatar aad u sarreysa oo cudurro iyo dhimasho ah u keenayaan boqolaal kun oo carruur Soomaaliyeed ah.
Muqdisho: Waddooyinka oo la Furayo
Meelaha laga soo galo Muqdisho waxaa la dhigay kontaroolo adag waxaana guud ahaan ay ciidamdu joojiyeen gaadiidka soo gala magaalada waxaana abuurmay goobo gaadiidku ay ku kala wareegaan.
Dr. Beyle: Horumar Ayaan ka Sameynay Maaliyadda
Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliya ayaa shalay faahfaahin ka bixisay yabooh lacageed oo ay ka heshay Bankiga Adduunka iyo Midowga Yurub, iyada oo wasaaraddu soo bandhigtay naqshadda sida ay u ekaan karto lacagta la sheegay in Soomaaliya loo soo daabacayo.
Martida Makrfoonka: Wasiirka Batroolka iyo Macdanta DFS
Martida Makrfoonka waxa ku marti ah Wasiirka Batroolka iyo Macdanta ee dowlada Federaalka, Cabdirishiid Maxamed Axmed.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaan idiinku soo gudbinaynaa qoddobo ay ka mid yihiin shirkii Amniga Qaranka ee Somalia iyo geeridii Alle ha u naxariistee wariye Maxamed Aadan Terra oo magaalada London ku geeriyooday
al Shabaab ayaa weerar ku dilay hal askari oo Maraykan ah, sidoo kale waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay afar askari oo maraykan ah, ugu yaraan laba askari oo Soomaali ah ayaa ku dhimatay weerarka.
Wariye Maxamed Aadan Teerra oo London ku Geeriyooday
Allaha u naxariistee, Maxamed Aaden Xirsi Teerra oo ka mid ahaa weriyayaasha rug caddaaga ah ee Soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla magaalada London.
Somaliland: Xeerka doorashada oo la ansixiyay
Golaha xukumadda Somaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashada iyo diiwaangelinta, iyadoo xeerkan oo kuraas baarlaman u qoondeynaya haweenka iyo beelaha laga tira badanyahay.